Naqshadeynta Laba-geesoodka ah ee Naqshadeynta Naqshadeynta Midabka Midabkiisu Fiican yahay Dahabka Dahabka Wanaagsan
Tags iyo surwaal
15 + sano oo khibrad xirfadeed & hadiyado ah
Waxyaabaha: zinc daawaha
Cabir: qiyaastii 3.5cm
Midabaynta: dahab dahab ah
Astaamaha: Naqshad laba-dhinac ah
Baakadaha: bacda / sanduuqa hadiyadda.
Habka farsamada: wax taaj oo kale, dhinto ridaya, qiraan, dahaadhay, midabaynta, QC, baakadaha.
Tixraaca farshaxanka: dhaldhalaalka jilicsan ee laba-geesoodka ah
Sooc gaar ah
Alaabada khaaska ah
pin dhaldhalaalka, calaamadaha, billadaha, qadaadiicda, keychain, astaamaha eyga, isku xirka, suunka xarkaha, calaamadda buuga, iwm.
Faylka naqshadda la heli karo
JPG, PNG, PDF, AI, CDR, PSD, iwm
zinc alloy, aluminium, birta, birta aan lahayn, naxaas, naxaas, lacag, iwm.
Range Cabbirka Custom
1-20cm, ama cabir kale oo kuxiran baahidaada.
Range dhumucdiisuna waxay Custom
1-10mm, ama dhumuc kale oo kuxiran baahidaada.
nikkel / nikkel madow / nikkel qaraami / dahab / dahab matte / dahab dahab kacay / dahab casri ah / qalin / naxaas / lacag qaraami ah / chrome, iwm.
dhimista-shubida, shaabbadda, xoqitaanka, iwm iyadoo ku xiran hadba sheyga.
dhaldhalaalka jilicsan, dhaldhalaalka adag, daabacaadda, leysarka, iwm.
Qaabka Naqshadeynta Qaaska ah
Waqti muunad ah
10-15 maalmood kadib marka farshaxanka dhijitaalka ah la oggolaado.
Caddayn farshaxan oo bilaash ah iyo dib u eegis
Tijaabooyin caadooyin bilaash ah
Waqtiga soo celinta gaaban
Tayo sare leh
1. Custom Pin Badges: pin dhaldhalaalka adag, pin dhaldhalaalka jilicsan, dhaldhalaalka jilicsan + epoxy pin, dhalaalaya dhaldhalaalka dhaldhalaalka, dhalaalaya biinka madow, iwm.
2. Qadaadiicyada khaaska ah: lacagta qadiimiga ah, qadaadiic lacagta ah, lacagta xusuusta, lacagta booliska, lacagta millatariga iwm.
3. Biladaha Khaaska ah: billadaha isboortiga, billadaha maaradoonka, billadaha milateriga, billadaha iyo koobka, iwm.
4. Furayaal khaas ah: keymanka dhaldhalaalka, astaanta keychain, key keyga baabuurka, dhalada furaha furaha, furaha furaha albaabka, iwm.
5. Suumanka suunka caadada u ah, boodhadhka qalinka ee caadada ah, isku xidhka caadooyinka, astaamaha gaarka ah, iwm.
Jiangxi Sanjia Farsamooyinka & Hadiyadaha Co., Ltd. waa warshad la aqoonsan yahay oo ISO iyo TUV ah.
Maaddaama aan nahay soo saare khibrad hodan ku ah warshadaha farsamada gacanta & hadiyadaha, waxaan diiradda saareynaa adeegga wax soo saarka caadada ah ee biinanka dhaldhalaalka ah, calaamada & astaanta, furayaasha, billadaha isboortiga, qadaadiicda xusuusta, astaamaha birta, calaamadaha, iwm.
Iyada oo silsilad warshadeed oo dhammaystiran, waxaan ku bixin karnaa adeeg hal-ku-habboon oo hal-joogsi ah oo si madax-bannaan u dhammeeya dhammaan howlaha wax-soo-saarka laga bilaabo naqshadeynta, barnaamijyada, wax-u-sameynta, dhimista-shaatiga / shaabadaynta, nadiifinta, isu-imaatinka, xoqidda, midabaynta QC iyo xirxirida. Tani waxay na siineysaa faa iido weyn siinta maareynta qiimaha saxda ah iyo xakamaynta tayada macaamiisha heerarka kala duwan ee shuruudaha.
Inta badan shaqaalaheena xirfada leh waxay in ka badan 10 sano khibrad u leeyihiin arimahan waxayna si weyn wax ugu biiriyaan shirkadayada siinta adeeg xirfadeed iyo alaab qancisa macaamiisheena dal iyo dibadba.
U hoggaansamida mabda'a ganacsiga ee faa'iidooyinka labada dhinacba, waxaan ku yeelannay sumcad la isku halleyn karo macaamiisheenna dhexdeeda adeegyadeenna xirfadeed, alaab tayo leh iyo qiimaha tartanka. Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa macaamiil badan oo dheeri ah si aan ula samayno iskaashi muddo-dheer ah annaga. Shaqaalaheena xirfadleyda ah ayaa had iyo jeer la heli karaa si ay ugala hadlaan shuruudahaaga una hubiyaan qanacsanaanta macaamiisha oo buuxda.
Hore: Warshadda Naqshadeynta Gaarka ah ayaa Sameysay Badbaadinta Dahabka Dahabka Dahaarka Laambadda jilicsan ee jilicsan
Xiga: Naqshadeynta Qaaska ah Qarniadaha Cilladaha jilicsan ee Midabka Qadiimiga ah ee Dahabka Dahabka ah
Macaamiisha qaaliga ah,
Waxaan nahay soo saaraha biinanka dhaldhalaalka, biinanka dhabta, calaamadaha, lacagta qadaadiicda, billadaha, furaha furayaasha, tags, shaashadda, iwm.
Pls noo keen nashqaddaada iyo xuduudaha gaarka ah haddii aad u baahan tahay xigasho faahfaahsan.
Dhammaan alaabooyinka halkan lagu muujiyey waa nashqado habboon. Iyagu waa tixraac keliya oo ku saabsan farsamada gacanta, ee ma ahan iibinta.
Ku soo dhowow inaad noo soo dirto baaritaan si aad u hesho xigasho bilaash ah iyo caddeyn farshaxan oo bilaash ah.
Aad ayaad u mahadsantahay.
Qadaadiic Coin Sameeyayaasha
Qadaadiic Challenge Custom
Qadaadiic Lacageed Oo Iib ah
SOO SAARKA HOT-SALE
Tayada Koowaad, Adeeg Sare
Custom Design Double-dhinac 3D dhinta ridaya Antiq ...
Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Birta ah ee Laba-geesoodka ah
Taliyaha Custom S Qadaadiic Gold Dahaarka jilicsan dhaldhalaalka ...
Qadaadiic bir ah oo laba dhinac leh Zinc Alloy oo laga sameeyay Dual P ...
Zinc Daawaha dhinta ridaya Qadiimiga ah Silver Commemora ...
Custom Design jilicsan dhaldhalaalka Color Antique Gold Pl ...
Cinwaanka: H3 Wadada, Saldhiga Warshadaha Nalalka ee Lutian Industrial Park, Degmada Poyang, Magaalada Shangrao, Gobolka Jiangxi, 333110 CN.
Tel: +86 0793 666 5008